Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 33
Moa ve ny fiarahamonina miafina miaina ny fihemorana na ny fandrosoana ny saina amin'ny fivoarany?
Ny maha-mpikambana ao anaty fiaraha-monina tsiambaratelo dia manakana ny saina tsy hanampy na hamonjy izany amin'ny fivoarany araka ny toetra sy ny fampivoarana an'ity saina manokana ity ary ny karazana tsiambaratelo fiarahamoniny izay maha-mpikambana azy. Ny fiarahamonina miafina rehetra dia azo sokajiana eo ambany lohany roa: ireo izay ny fampiofanana ny saina sy ny vatana ho an'ny saina sy ny tanjon'ny fanahy ary ny olona manana tombony ara-batana sy ara-nofo. Indraindray ny olona dia mitoetra ao anatin'ny sokajy fahatelo, izay amina fiaraha-monina izay mampianatra ny fampandrosoana ara-tsaina ary mitaky fifandraisana amin'ny zavaboary ara-panahy. Nolazaina fa misy trangan-javatra hafahafa vokarina ao amin'ny faribolana sy fipetrahany. Izy ireo koa dia manambara fa manana sy afaka hanome azy ireo izay heveriny fa mety, tombony ara-batana amin'ny hafa. Ireo rehetra ireo dia tokony ho eo ambanin'ny kilasy faharoa, satria ny ahitra dia hita fa ara-tsaina sy ara-batana.
Ny fiarahamonina miafina ao amin'ny kilasy voalohany dia vitsy raha ampitahaina amin'ny kilasy faharoa; amin'ireo vitsy an'isa ireo fotsiny dia tena manampy ny saina amin'ny fivoarana ara-panahy. Ao anatin'ity kilasy voalohany ity dia misy ny fikambanan'ny fikambanana ara-pivavahana izay manandrana manampy ny mpikambana ao amin'ny fifohazana sy famoahana ara-panahy - izay tsy manana zavatra toy ny fiofanana ara-politika na ny fampianarana miaramila na ny torolàlana amin'ny fomba fiasa-ary koa ny fikambanan'ny filozofia ary foto-pinoana. Ireo izay manana finoana ara-pinoana manokana dia mety hahazo tombony amin'ny fananana fiarahamonina miafina ao anatin'io finoana io raha toa ka tsy avelan'ny olona hitazona ny saina ny haizina ary tsy manakana azy tsy hahazo fahalalana izany. Alohan'ny hananganana finoana iray ho an'ny fiarahamonina miafina ao amin'ny finoany dia tokony hanadihady tsara ny zavatra sy ny fomba iasany izy. Betsaka ny vondrona miafina ao anatin'ireo antokom-pivavahana lehibe ireo. Ny sasany amin'ireny fiaraha-monina miafina ireny dia mitazona ny mpikambana ao aminy tsy ho fantatra momba ny fahalalana ny fiainana, ary noheveriny ho mpikambana amin'ny finoana hafa ny mpikambana ao aminy. Ny fiaraha-monina miafina toy izany dia mety hiteraka fahavoazana lehibe ao an-tsain'ireo mpikambana tsirairay ao aminy. Ny fanazaran-tena fanavakavahana sy ny tsy fahalalany izany dia mety hanjary, hampivadi-po ary hanafintohina ny saina fa hitaky fanaintainana sy alahelo maro hanitsiana ny hadisoana mety ho nahatonga izany. Ireo izay manana ny finoany manokana momba ny fivavahana iray dia mety hahazo tombony amin'ny fananana fiarahamoniny miafina ao amin'izany fivavahana izany raha toa ny zavatra sy fomba fiasa ao anatin'io fiaraha-monina io dia mifanaraka amin'ny fankatoavanan'io saina io, ary raha mbola mieritreritra izany ny saina manokana na no ampianarina an'io fivavahana io. Ny fivavahan'izao tontolo izao dia maneho ny sekoly isan-karazany izay misy ny eritreritra sasany voaofana na ny fanabeazana ho amin'ny fampandrosoana ara-panahy. Rehefa mahatsapa ny olona fa mahafa-po ny faniriana ara-panahy ny fivavahana dia tafiditra ao anatin'ny kilasin'ny fiainana ara-panahy izay asehon'ny fivavahana izany. Rehefa tsy mamatsy ara-pahalalana ara-panahy ny saina ny fivavahana, na rehefa manomboka mametra-panontaniana ny "fahamarinana" ao amin'ny fivavahany ny olona iray, dia midika izany fa tsy fananany intsony izy na tsy tafasaraka aminy. . Raha misy olona misalasala, raha tsy afa-po sy manameloka ny fampianaran'ny fivavahany izy fa tsy manana antony hafa noho ny moana sy ny tsy fahalalana, izany dia ho famantarana fa ny sainy dia mihidy amin'ny fahazavana ara-panahy sy ny fitomboana ary mianjera ambanin'ny sariny izy fiainana ara-panahy. Amin'ny lafiny iray, raha mahatsapa ny saina fa ny fivavahany manokana na ny fivavahany izay nahaterahany dia tery sy tery ary raha tsy mahafeno na mamaly ireo fanontam-pinoana izay tadiavin'ny sainy ho fantatra, dia midika izany fa misaina sy mitombo ny saina ao anatin'io kilasy io izay asehon'io fivavahana iray io ary mampiseho fa mitaky zavatra hanome ny sakafo ara-tsaina na ara-panahy izay ilain'ny fitomboana ny sainy.
Ireo fiarahamonina miafina ao amin'ny kilasy faharoa dia amboarin'ny fikambanana izay tombony amin'ny tombony ara-politika, ara-tsosialy, ara-bola sy ny vola mamatsy vola. Eo ambanin'ity kilasy ity dia misy ny fiaraha-monina sy ny mahasoa, ireo izay nalamina tamim-piafenana mba hanongam-panjakana, na ireo niara-nitambatra tamin'ny tenany ho tanjon'ny fanararaotana, famonoana olona na famoronana ara-nofo na manafintohina. Mety hanambara amin'ny fomba mora ny iray na tsia ireo rehetra ireo na hanadino ny fivoaran'ny sainy raha hainy ny tanjony sy ny tanjony.
Ny hevitry ny tsiambaratelo dia ny fahalalana na ny fananana zavatra tsy ananan'ny hafa, na ny fizarana fahalalana amin'ny vitsivitsy. Mahery ny fanirian'ity fahalalana ity ary manintona ilay tsy mbola feno, ny tanora ary ny fitomboan'ny saina. Izany dia aseho amin'ny faniriana izay tokony hananan'ny olona zavatra tsy maintsy ampidirina sy sarotra hidirany ary izay hampihena ny fankasitrahana na fialonana na fampitahorana an'ireo izay tsy ao. Na ny ankizy aza dia manana tsiambaratelo. Ny zazavavy kely iray dia manao taolan-tehezana eo amin'ny volony na eo an-tsorony mba hampisehoana fa manana tsiambaratelo izy. Saro-piaro sy mahafinaritra ny zazavavy kely rehetra izy mandra-pahafantatra ny tsiambaratelo, manary ny lanjany izy. Avy eo ny tovovavy kely iray misy tadiny iray ary tsiambaratelo vaovao no ivon'ny zavatra mahasarika. Raha tsy eo ny fiaraha-monina ara-politika sy ara-bola ary ratsy fanahy na meloka, ny ankamaroan'ny zava-miafina ao amin'ny fiaraha-monina miafina eto an-tany dia tsy manan-danja firy na tsy misy dikany amin'ny alàlan'ny tsiambaratelon'ny zazavavy kely. Na izany aza, ireo izay mety ho azy ireo dia mety ho feno "kilalao", izay mahasoa azy ireo satria ny tsiambaratelon'ny tovovavy dia azy. Rehefa mihamatotra ny saina dia tsy faniriana miafina intsony; dia mahita fa izay tsy maniry tsiambaratelo dia tsy matotra, na mitady ny hazavana sy ny asany mba tsy hisian'ny mazava. Ny saina matotra dia maniry hampiely ny fahalalana, na dia fantany aza fa tsy afaka omena mitovy amin'ny rehetra ny fahalalana. Rehefa mandroso ny hazakazaka amin'ny fahalalana, tokony hihena ny fangatahan'ny fiaraha-monina miafina ho an'ny fampandrosoana ny saina. Ny fiaraha-monina miafina dia tsy ilaina amin'ny fandrosoana ny saina ankoatry ny vanim-potoanan'ny tovovavy. Avy amin'ny lafiny ara-barotra sy ara-tsosialy sy literatiora, ny fiainana mahazatra dia manana ireo tsiambaratelo rehetra ilain'ny saina hamahana ary amin'ny alalàn'ny saina mandroso hatrany amin'ny sehatry ny fahatanorany. Tsy misy ny fiarahamonina miafina afaka mampandroso ny saina ankoatry ny fivoarany voajanahary na hamela azy hahita amin'ny alàlan'ny zava-miafina ny natiora ary hamaha ny olan'ny fiainana. Ny fikambanana vitsivitsy miafina eto amin'izao tontolo izao dia mety hahasoa ny saina raha tsy hijanona eo amboniny ny saina, fa hamita ny tena dikan'ny fampianarany. Ny fandaminana toy izany dia ny Order Mason. Ny fisainana vitsy an'isa amin'ity fikambanana ity dia tsy avy amin'ny fandraharahana na tombontsoa ara-tsosialy. Ny tena hasin'ny fanehoana an'ohatra sy ny fampianarana ara-moraly sy ara-panahy dia saika very tanteraka amin'izy ireo.
Ny fikambanana miafina iray izay mahasoa ny saina amin'ny fivoarany dia tsy fantatra ho fiarahamonina miafina na tsy fantatra amin'izao tontolo izao. Tsy maintsy ho tsotra sy tsotra toy ny fiainana voajanahary izany. Tsy miditra amin'ny fombafomba ny fidirana amin'ny fiarahamonina miafina toy izany. Amin'ny alàlan'ny fitomboana, amin'ny alàlan'ny ezaka ataon'ny saina. Tsy maintsy mitombo ao anatiny fa tsy nampidirina. Tsy misy olona afaka misintona ny sain'ny fikambanana toy izany raha toa ka amin'ny fiezahana irery dia mitombo hatrany ny saina. Rehefa mitombo ao an-tsaina ny saina iray izay miezaka mafy hanaisotra ny tsy fahalalana amin'ny alàlan'ny fanesorana ny rahona, ny fisamborana ireo tsiambaratelo ary amin'ny alàlan'ny fahazavana ny zava-manahirana rehetra ary ny fanampiana ny saina hafa amin'ny fivoaran'ny voajanahary sy ny fampandrosoana. Ny fiankinana amin'ny fiarahamonina miafina dia tsy hanampy ny saina izay maniry ny hitombo ho azy.
Azo atao ve ny mahazo zavatra tsy amin'antony? Maninona ny olona no te haka zavatra tsy amin'antony? Fomba ahoana no mahatonga ny olona toa mahazo zavatra tsy amin'antony, tsy maintsy mandoa izay azony?
Mihevitra ny rehetra fa tsy misy olona mahazo zavatra tsy misy ary ny faminaniana no diso ary ny fanandramana tsy mendrika; nefa, rehefa mieritreritra an'izany amin'ny fifandraisany amin'ny zavatra sasany izy ny faniriana, tsy voahaja ny fitsarana tsara ary mihaino ny soso-kevitra izy ary mandiso ny tenany amin'ny finoana fa azo atao ary he mety mahazo zavatra tsy amin'antony. Ny fiainana dia mitaky ny fiverenana na ny kaonty hatao amin'ny zavatra rehetra voaray. Ity fepetra ity dia miorina amin'ny lalàn'ny filana, izay manome ny fivezivezena aina, ny fikolokoloana ireo endrika ary ny fanovana vatana. Izay manandrana tsy mitady na inona na inona izay tsy ho tonga aminy, dia manelingelina ny fizaran'ny fiainana sy ny fizarana endrika araka ny lalàna voajanahary, ary noho izany dia mahatonga ny tenany ho sakana ao amin'ny vatan'ny natiora izy. Izy no mandoa ny sazy, izay toetra sy ny vatan'ny fitantanana ny lalàna rehetra ary natao hamerenana izay nalainy fa raha tsy izany dia nesorina tanteraka izy na esorina. Raha nanohitra izany izy tamin'ny filazany fa izay azony dia tsy ho tonga any aminy ihany, tsy nahomby ny tohanany satria raha tsy nahazo na inona na inona izy, dia toa ho tonga tamy tsy nisy ny ezaka nataony, dia tsy tokony ho nanao ezaka izay nataony mba hahazoana izany. Rehefa tonga ny zavatra iray nefa tsy misy ezaka mazava, toy ny antsoina hoe lozam-pifamoivoizana na kisendrasendra na lova, dia tonga noho izy ary araka ny fiasan'ny lalàna voajanahary, ary amin'izany fomba izany dia ara-dalàna sy araka ny lalàna. Amin'ny toe-javatra hafa, toy ny fahazoana tombontsoa ara-batana sy ara-nofo amin'ny alàlan'ny faniriana fotsiny, na amin'ny fisainana fotsiny, na amin'ny fanaovana fangatahana araka ny fehezanteny fantatra amin'ny hoe lalàna manankarena na ny lalànan'ny fanetren-tena, tsy azo atao ny hahazoana zavatra na inona na inona na dia ny iray miseho ho mahazo zavatra tsy amin'antony. Ny antony iray mahatonga ny olona hiezaka ny tsy hahita na inona na inona, dia satria na dia tsapan'izy ireo fa tsy marina izany, dia hitan'izy ireo fa ny sasany dia toa tsy noheverin'ny sasany, ary noho ny filazan'ny hafa azy olona izay azon'izy ireo dia mandeha amin'ny alàlan'ny faniriana fotsiny azy ireo na mitaky azy ireo ary mitaky azy ireo mandra-pahatonga azy ireo. Ny antony iray hafa dia satria ny fisainan'ny olona iray tsy ampy taona ary matotra tsara hahafantarany fa tsy afaka mahazo zavatra tsy misy antony na inona na inona fironana, fihetsika na fiheverana an'izany. Ny antony iray hafa dia satria ny iray izay mieritreritra fa mahazo zavatra tsy misy dikany dia tsy manao ny marina. Amin'ny fiainam-barotra mahazatra ny harambato lehibe indrindra dia ireo izay mino fa mahavita mandanjalanja ny lalàna ary mahazo zavatra tsy amin'antony, saingy izany dia noho izy ireo mikasa ny hanao ny olona ho mora fetsifetsena noho izy ireo manome ny filany. Noho izany dia manome drafitra haingana manankarena izy ireo na tetik'asa hafa ary manosika ny hafa ho tsy manao ny marina fa tsy manana traikefa lavitra noho izy ireo hiditra ao aminy. Ny ankamaroan'ireo izay nalaina tamin'ny tetika dia matetika nasehin'ilay mpanamory hoe ahoana ny fomba hahazoana ny tsara indrindra amin'ny olona sasany ary manazava ny fomba hahazoany manankarena haingana. Raha marina ireto dia tsy ho voarindra ao anatin'ny tetika fa, amin'ny alàlan'ny fanintonana ho amin'ny habibiana sy ny fitsiriritan-dratsiny ao anaty fitaka sy amin'ny fomba tsy mendrika azy, dia mahazo izay omen'ny lasibatra izy.
Ny olona mahazo zavatra dia tsy maintsy mandoa izay azony. Raha mahazo zavatra izay toa mivoaka avy amin'ny rivotra ny olona ary latsaka an-davany noho ny fiantsoan'ny lalàn'ny fahafenoana na ny trano fitehirizam-panjakana na amin'ny lalànan'ny fanetren-tena, na tsia, dia toa ny fohy ireo maso mahita tsy misy dikany izay manao fividianan-trosa tsy takatry ny trosa, tsy ampoizina ny fotoana anaovana fotoana. Sahala amin'ireo tsy manana loharanom-bola izay mividy trosa, matetika ireo fihetsika feno fihobiana ireo dia mahazo izay tena tsy mila; sahala amin'ireto mpividy ireto tsy manam-petra, ny nofinofy sy ny hatsaram-paniriana ny fangatahan'ny “lalàna manankarena” dia hanao zavatra betsaka amin'ny zavatra azony izy ireo - saingy mahita ny fatiantoka izy ireo rehefa tonga ny fotoana. Mety tsy ekena ny trosa iray, fa ny lalàna no mamerina ny fandoavany. Izay mangataka fahasalamana ara-batana sy harena ara-batana amin'ny alàlan'ny fangatahana sy fitakiana ireo avy amin'ny "lalànan'ny fahafenoana", na avy amin'ny "lavorary", na avy amin'ny zavatra hafa, ary izay mahazo zavatra takiny, fa tsy mahazo azy ara-dalàna ao amin'ny sehatra. izay misy azy dia tsy maintsy averiny izay azony azony ary ny vola takiana amin'ny fampiasana azy.
Ny iray dia mety hanitsy ny aretina mikitrana ary mamerina ny vatana amin'ny fahasalamana amin'ny alalan'ny fiheverana; fa ho hita fa ny aretin-kozatra manelingelina dia matetika no ateraky ny saina mikorontana. Rehefa raisin'ny saina ny fihetsika tsara dia manitsy ny olana mikorontana ary manohy ny asany voajanahary ny vatana. Izany dia fanafody ara-dalàna, na ny fanesorana ny antony mahatonga ny aretina, satria ny fanafody dia vokatry amin'ny alàlan'ny fitsaboana ny olana misy ao aminy. Saingy tsy ny aretina rehetra sy ny fahasalamana tsy mahomby noho ny saina manelingelina. Ny fahasalamana sy ny aretina matetika dia vokatry ny fihinanana sakafo tsy mendrika sy ny fanomezana fahafaham-po ny filan'ny morbid ary ny faniriana tsy ara-dalàna. Ny toe-batana sy ny fananana dia omena amin'ny alàlan'ny fahitana fa ilaina amin'ny asan'ny olona iray izy ireo, ary avy eo amin'ny alàlan'ny fiasana ho azy ireo araka ny fomba ara-batana ara-dalàna ekena.
Mety hanjavona ny aretina ateraky ny famahanana tsy mety, ary azo atao ny mahazo vola sy tombontsoa ara-batana hafa amin’ny fitakiana sy fitakiana izany amin’izay fehezanteny tian’ny saina noforonina na raisina. Izany dia azo atao satria ny saina dia manana hery miasa amin'ny saina hafa ary mahatonga azy ireo hanatanteraka ny fepetra izay iriny ary satria ny saina dia manana hery ary mety ho afaka miasa amin'ny toetry ny zavatra misy azy, ary ity zavatra ity dia ao anatin'ny toe-javatra misy azy. ny fihodinana dia mety handray andraikitra na hitondra ny fepetra takian'ny saina; azo atao izany satria mety hampiasan'ny saina ny heriny amin'ny vatana ka hiteraka aretina ara-batana tsy hita mandritra ny fotoana fohy. Saingy amin'ny tranga rehetra izay manohitra ny lalàna voajanahary ny saina mba hitondra vokatra ara-batana dia mitaky ny fanitsiana ny lalàna, ary matetika dia henjana kokoa ny fihetsika noho ny olana tany am-boalohany. Koa rehefa lazaina ny fahasalamana ary rehefa tsy omena ny fepetra ara-batana ho an'ny fahasalamana ara-batana, ny saina dia mety hanery ny fanjavonan'ny fitomboana tsy salama, toy ny fivontosana. Saingy ho an'ny fitsaboana miharihary toy izany dia takian'ny natiora ny fiezahana hisoroka ny fampiharana ny lalàny. Amin'ny alalan'ny fanerena ny fiparitahan'ny fivontosana dia mety ho ny raharaha momba ny fivontosana — toy ny rehefa voatery nandao ny toeram-ponenany ireo olona tsy manara-dalàna noho ireo mpanavao mpanelanelana sy adala — voatosika hitady fonenana any amin'ny faritra hafa amin'ny fiaraha-monina, izay hitera-doza kokoa sy hitera-doza kokoa. sarotra kokoa ny mitady sy mitsabo. Rehefa miparitaka noho ny fanerena ara-tsaina ny fivontosana dia mety hanjavona avy amin'ny faritra iray amin'ny vatana toy ny fivontosana ary hiverina any amin'ny faritra hafa amin'ny vatana toy ny fery maharikoriko na homamiadana.
Rehefa manantitrantitra ny olona iray ary omena fananana ara-batana amin'ny alàlan'ny fangatahana azy ireo amin'ny "tsy misy fetra" na "trano fitehirizan-tena", dia hankafiziny mandritra ny fotoana fohy izany satria ny mpiloka dia mankafy ny tombony azo. Saingy ny lalàna dia mitaky fa tsy ny hamerenany ny tsy azony ihany no tokony hamerenany, fa ny onony dia tokony handoa izay azony. Antsoina io fandoavam-bola io rehefa niasa ho amin'ny zavatra irina ny fanonganana - ary very rehefa tsy azony atao; na azo atao ny fandoavam-bola aorian'ny nahazoany fananana sasany ary very azy amin'ny fomba tsy ampoizina; na mety nentiny nalaina taminy izy rehefa nahatsapa tena mahatoky azy ireo. Ny voajanahary dia mitaky ny fandoavam-bola amin'ny vola madinika sy ny fitovizany amin'ireo trosa nifanekena.
Rehefa mikasa ny hanao ny tenany ho mpanompo amin'ny vatana ny saina amin'ny fomba tsy ara-dalàna, ary manitsakitsaka ny fahefany avy amin'ny fiaramanidina ho any amin'ny ara-batana, ny lalànan'ny tontolo ara-tsaina dia mitaky an'io fanadinoana io mba hanajanonana ny fahefana. Ka ny sainy very ny heriny ary manjavozavo ny iray na ny fahaizany. Ny fandoavam-bola takian'ny lalàna dia atao rehefa mieritreritra ny fahantrana ny fahefana, ny fijaliana ary ny olana izay nahatonga ny hafa hahazo ny tanjon'ny faniriany, ary rehefa niady tamin'ny haizina ara-tsaina izay misy azy, ao aminy fiezahana hanitsy ny hadisoana ary hamerina ny tenany ho saina amin'ny fihetsik'izy ireo manokana. Ny ankamaroan'ireo olona miseho ho mahazo zavatra tsy misy ilana azy dia tsy miandry miandry fiainana hafa voatery terena handoa. Ny fandoavam-bola dia matetika antsoina sy aloavina amin'ny fiainany ankehitriny. Ho hita marina izany raha hijery ny tantaran'ny olona izay nanandrana naka na inona na inona ny olona izay niseho ho nahomby. Mpanao heloka bevava ara-tsaina izy ireo, ary gadraina any am-ponja ao amin'ny tranobeny manokana.